true organizing /zu-ZA/tools-for-life/organizing/steps/what-is-organization.html quiz 1 6 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/organizing_zu_ZA.jpg OkuyisiSekelo sokuHlela
Iyiphi indlela engcono yokuhlela ukusebenza, inhlangano noma iprojekthi? 1
Okokuqala thola lonke ulwazi mayelana nazo zonke izinto okufuneka zibe khona ukwenza lomsebenzi.
Bese uhlanganisa ezifanayo izinhlobo zezenzo ezidingekayo kwiphrojekthi imisebenzi ngayodwana.
Lapho usunikeze abantu imisebenzi yabo, lungisa izindlela zokuxhumana ezizohamba phakathi kwamalungu eqembu lakho.
Hlela ukuxhumana kanye nokubambisana nabanye abantu, amaqembu noma izinkampani njengoba kudingeka ukuze iphrojekthi yenziwe.
Ngemuva kokuba konke lokhu sekwenziwe, into okufanele yenziwe ukuthi amalungu eqembu aqhubeka enze umsebenzi wawo.
/zu-ZA/tools-for-life/organizing/steps/what-is-organization.html#answer-1 Kuyini ukuHlela? Ukuzenzela ngokwakho futhi ukhiphe imiyalo eminingi kubantu bese uzinika ithemba lokuthi bayayiqonda imiyalo. Qoqa imininingwane ngazo zonke izinto okufanele zenziwe, hlela izinhlobo ezifanayo zezenzo zibe yimisebenzi engayodwana, unikeze abantu lemisebenzi ukuthi bayenze, uhlele izindlela zokuthi bona baxhumane, ubanikeze izinto abazidingayo futhi ubone ukuthi bayawenza ngempela umsebenzi. Zama okusemandleni akho bese uzethembisa ukuthi konke kuzophuma kulungile. Umkhiqizo uyinto eqediwe okungashintshwana ngayo. Ukushintshana kusho ukunikela ngokuthile okubalulekile ngembuyiselo yokuthile okubalulekile. Lokhu kungaba noma iyiphi insizakalo noma into. 0 Umkhiqizo uyinto eqediwe engashintshaniswa. Ukushintshanisa kusho ukunikela ngokuthile okubalulekile ngembuyiselo yokuthile okubalulekile. Lokhu kungaba noma iyiphi insizakalo noma into. Umkhiqizo uyinto eqediwe engashintshaniswa. Ukushintshanisa kusho ukunikela ngokuthile okubalulekile ngembuyiselo yokuthile okubalulekile. Lokhu kungaba noma iyiphi insizakalo noma into. /zu-ZA/tools-for-life/organizing/steps/what-is-organization.html#answer-2 Kuyini ukuHlela? Iqiniso Amanga
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana Kuyini ukuHlela? bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.